Geed geedeedka | December 2019
Sida loo buufiyo geedka tufaaxa ee cayayaanka, tallaabooyinka si loo badbaadiyo beerta
Si aad u hesho goosashada wanaagsan ee tufaaxa inta badan ka hortagaan cayayaanka geedaha tufaaxa, taas oo ay leedahay badan oo. Sidaa darteed, dhammaan kuwa ku koraan geedo tufaax ah ee beerta, waa muhiim in la ogaado dhammaan cayayaanka cayayaanka ee geedkan. Sida loo ilaaliyo geedka tufaaxa ee ka soo baxa sawirrada Cayayaanka iyo xakamaynta cayayaanka Apple waa adag tahay sababta oo ah way adag tahay beerta aan dukaanno lahayn si ay u aqoonsato cayayaan cayiman si loo doorto waxqabad tayo leh si loo tirtiro.
Sida loo ilaaliyo "Melbu" ka soo cayayaanka iyo cudurrada
Dhirta Apple waa mid ka mid ah geedaha ugu muhiimsan ee beeraha. Waxaa jira noocyo badan oo leh Bisaylkiisa kala duwan oo dhadhan. Si kastaba ha ahaatee, waxay yihiin dhammaanba kaydka qiimaha fiitamiinada. Si kastaba ha noqotee, si loo gaaro goosashada wanaagsan, ninkii beerta ka shaqaynayay wuxuu u baahan yahay inuu geedo ka badbaadiyo cudurada iyo cayayaanka. Melba ee cudurada ugu weyn iyo daaweyntooda Melba waa noocyo kala duwan oo tufaax ah oo caan ah, caan ku ah miraha cajiinka ah oo cajiib ah iyo wax-soosaarkooda sare.
Maxaa la sameeyaa haddii aphid uu u muuqday geed tufaax ah intii loo daaweyn lahaa warshad ka hortag ah cayayaan
Aphids on geed tufaax ah u muuqan kara ixtimaalka sare, sidaas darteed qof kasta oo doonaya in ay ilaaliyaan dalaggooda, waa mid aad u muhiim ah in la ogaado sida loola dhaqmo iyaga. Aphid waa cayayaanka yaryar, xajmiga aan ka badnayn 4-7 mm, si kastaba ha ahaatee waa cayayaanka ugu khatarsan ee beerta iyo miraha miraha. Kumanaan ka mid ah geedaha tufaaxa ayaa cayayaanka cayayaanka leh ay soo weerareen sanad walba, iyada oo khasaaro weyn ay soo gaartay.
Reed Agaabaha Ranetka: sharaxaadda noocyo caan ah
Ranetka waa magaca caamka ah ee noocyo kala duwan oo ah noocyo isku dhafan oo geedo tufaax ah, laga helay natiijada xulashada caanaha tufaaxa ee Yurub ee leh noocyada dhaxan u adkaysta ee geedaha tufaaxa Siberian Berry. Natiijada ka soo baxda isbitaallada ayaa ah geedo yar yar oo kobcaya kuwaas oo si fiican ugu habboon cimilada culus waxaana lagu kala saaraa wax-soosaarka sare.
Noocyada codeynta: hababka, hababka iyo diyaarinta cayayaanka
Maanta qofna laguma ilaaliyo cayayaan sida aboorka aboorka. Waxay meel walbahaareysaa, dhulgooyinku waxay ka soo baxaan warshadaha warshadaha iyo dhulka. Mararka qaarkood halganka la socda waxaa la daahinayaa bilooyin dheer ama xitaa sanado. Goobo la burburiyey, dadaal badan, waqti iyo lacag lagu qaato burburinta bukaan-socodka - cidna ma rabto in ay tan mariso.
Sida loo xalliyo geed tufaax ah ka dib ubax, xakamaynta cayayaanka
Si aad u ahaato mid deggan oo badan oo ka mid ah dalagyada intooda badan koray, waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo iyaga oo leh ilaalin waqtigii loogu talagalay cudurada iyo cayayaanka. Ma aha mid ka reeban arrintani waa geedo geedo waaweyn oo beerta lagu koray. Gaar ahaan, bannaanka u yihiin inta badan xiiso leh waxa la buufiyo tufaax ka hor iyo ka dib ubax.
Midhaha "Filling White" marka hore waxay ka soo baxaan dhammaan noocyada tufaaxa. Waxay leeyihiin dhadhan wacan waxayna u fiican yihiin macaanka, macaanka iyo cuntada kale ee cuntada qasacadaysan. Noocyada noocan oo kale ah ayaa laga helaa ku dhowaad qoys kasta, way fududahay in la joogteeyo oo aan abuurin dhibaato aan loo baahnayn. Haddii aan bixinno geedaha yaryar ee "Apple White" oo leh quudin iyo quudin waqti gaaban, geedku wuxuu u mahadcelinayaa fruiting frauiting sannadka saddexaad ka dib markii la beero.
Dhibaatada weligeed ah ee dadka deggan xagaaga waa meel bannaan. Waxaan doonayaa in aan soo saaro wax badan, laakiin goobta ayaa xuduud u ah, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u qorsheyso qaybinta aagga. Haddii ay suurtagal tahay in la sameeyo tijaabooyin beerta ugu yaraan sannad kasta, lambarkan ma shaqeyn doono beerta. Geed kasta wuxuu u baahan yahay boos ku filan nidaamka xididka iyo taajka.
Sida loo abuuro oo u koraan noocyo geedo tufaax ah "Medunitsa" aaggooda
Apple geed "Medunitsa" - noocyada ugu caansan ee geedaha tufaaxa xagaaga, taas oo lagu gartaa adagaanta jiilaalka iyo sifooyinka wanaagsan ee midhaha. Taariikhda noocyada beerashada tufaaxa "Medunitsa" Noocyo Apple "Medunitsa" oo la baddalay in ka badan 50 sano ka hor. Cilmi-baadhaha S. I. Isaev wuxuu soo gooyay laba nooc: Cinnamon Striped iyo Welsey. Kala duwanaanshahan waxaa loo tixgeliyaa guul weyn, sababtoo ah waxay u adkaysataa qolofta.
Casabada dhirta Orlovsky Oromada ayaa si aad ah loo qiimeeyaa bannaanka ma aha oo kaliya dhadhankiisa aad u fiican, soo bandhigida midhaha, nolosheeda dheer, laakiin sidoo kale quruxda geedaha ubaxyada. Taariikhda xulashada noocyo tufaax ah "Sinap Orlovsky" Tijaabooyinka noocyo tufaaxa ah "Sinap Orlovsky" waxaa la soo saaray 1955 by Machadka Cilmi-baarista Dhammaan Ruush ee Dalagyada Miraha.
Tufaaxa xilliga qaboobaha ah ee "Northern Synapse" kala duwanaan maaha kuwo aan laga helin dhadhanka noocyada ugu caansan ee aristocracy ee waqooyiga dhexe. Si kastaba ha ahaatee, soo bixitaanka kooxdan waxaa sababay rabitaanka lagu hagaajinayo midhaha hadda jira, loogu talagalay dadka maxalliga ah. Kala duwan ayaa leh iska caabin xoog leh oo dhaxan, taasoo ah mid muhiim u ah gobollada xaaladaha cimiladu ay xadidanayaan xilliga sii kordhaya ee dhirta.
Sida loo koro geedaha tufaaxa ee Jigjevskoe ee beertayda
Baahida loo qabo tufaax ayaa la arkaa wakhti kasta oo sanadka ah. Laakiin gaar ahaan xilliga jiilaalka iyo horraanta gu'ga, waxaan sidoo kale dooneynaa tufaax casiir leh. Noocyada tufaaxa xagaaga horeba waa la cunay. Waxaad dooran kartaa tufaax la soo dhoofiyo, laakiin way qaali karaan, badanaaba taahid. Sidaa darteed, jacayl gaar ah ee bannaanka u u qalmay noocyo dayrta, taas oo mar dambe bislaadaan oo si fiican loo kaydiyaa.
Horumarka geedaha tufaaxa "Sun": Talooyin ku saabsan abuurista iyo daryeelka
Tufaaxa xilliga dayrta ee "Sun" ayaa ay jecel yihiin beeralayda guryaha sababtoo ah dhadhankiisa sare iyo tayada ilaalinta wanaagsan. Bisaylkiisa, waxay kooxo guduudan u qurxinayaan taajka iswada leh ee geed yar. Intaa waxaa dheer, kala duwan tani waxaa lagu kala soocay fududaynta beerashada beeraha. Maqaalkani waxa aanu sharxi doonaa sida loo koro geed "Apple" oo ku yaala goobtaada, iyo sidoo kale falanqaynta faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka kala duwan ee kala duwan.
Kala duwanaanta tufaaxa "Currency", beerashada iyo daryeesha geed geedka
Soo bixitaanka geedaha tufaaxa ee xayawaanku waxay xalliyeen dhibaatada ka jirta booska yar yar ee sirqoollada khaaska ah, taas oo u oggolaanaysa beerta iyo beerta xayawaanka inay si firfircoon u isticmaalaan aagga isla markaana u soo ururiyaan dalagyo qurxoon. Tixgeli sifooyinka mid ka mid ah noocyada jiilaalka ugu fiican iyo falanqeynaya wax-qabad ee beerashadooda.
Secrets of beerashada guul leh ee tufaax "Berkutovskoe"
Dhirta Apple waa mashruuc beerta muddada dheer ah, waana in aad si habboon uula socotaa, sababtoo ah waxaad dooran geed geedo kuu adeegi doonta sanado badan. Wax walba waa in la tixgeliyaa: sifooyinka daryeelka, dhalidda, wakhtiga firaaqada, wakhtiga kaydinta iyo waxyaabo kale oo badan. Wixii cimilada ee kooxda dhexe, geedka tufaaxa Berkutovskoe waa kaamil ah.
Tilmaanta, abuurista iyo daryeelka ee qorax guntama
Kala duwan waxaa loo yaqaan beerta guriga gudaheeda in ka badan boqol sano. Markii hore, waxa uu ku khasbanaaday inuu soo bandhigo beerta oo dhan, iyo maanta waa la ilaaway wax yar sababtoo ah badi noocyo kale oo geedo tufaax ah. Si kastaba ha ahaatee, kuwa ku kalsoonaa isaga, waxay helayaan goosashada tufaax qurux badan leh dhadhan fiican. Qeexida geedka dhirta "Cinnamon Striped" Si aad u qadariso faa'iidooyinka geedkii beerta, waa inaad si taxadar leh u barataa sharraxaadda beeraha "Cinnamon striped".
Jiilaalku si dhakhso ah ayuu u socdaa oo u soo dhowaadaa beertaada, iyo dabaysha iyo shimbiraha, duullaankii jiirka iyo cayayaanka in ka badan jilbaha. Dhammaan tani waxay dhaawici kartaa beertaada tufaaxaaga. Waxaad ka ogaan doontaa sababaha dhirta dhirta loo yaqaan 'whiten', in la gashado oo keliya guga, sida loo ciribtiro iyo sida loo ilaaliyo beertaada ka soo jeeda arimo aan wanaagsaneyn iyada oo loo marayo geedo cagaar ah oo habboon.